Saturday October 19, 2019 - 09:01:34 in Wararka by Super Admin
Tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dil saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay mid kamida degmooyinka gobolka Banaadir.
Rag hubaysan ayaa maanta xaafadda Say biyaano ee degmada Hodon magaalada Muqdisho ku dilay mid kamida saraakiisha ugu sarraysa maleeshiyaadka Bangaraafta loo yaqaan ee wada shaqeynta laleh ciidamada Mareykanka.
Ilo wareedyo dhanka amniga ah oo lahelay ayaa xaqiijinaya in xoogag katirsan Al Shabaab ay degmada Hodon ku dileen sarkaal lagu magacaabi jiray Muuse Abuukar Max'med Nuuroow oo kamida ahaa saraakiisha ciidamada dowladda ee Mareykanku ku tababaray garoonka diyaaradaha Balidoogle.
Nuuroow ayaa ciidamada AFRICOM uqaabilsanaa sahminta goobaha weerarada habeen dheelmadka ah lagu qaadayo deegaanno katirsan gobolka Sh/Hoose.
Wararka ayaa intaas ku daraya in xoogagii weerarka geystay ay horay usii qaateen bastoolad uu watay sarkaalka ladilay "Mujaahidiinta ayaa degmada Hodon ku khaarijiyay Muuse Abukar Axmad Nuuroow oo katirsanaa maleeshiyaadka Ashahaadda ladirirka Murtadiinta Bangarafaata wuxuu ahaa murtad cadowga ku hoggaamin jiray deegaanno katirsan Sh/hoose" ayaa lagu yiri war kooban oo Al Shabaab kasoo baxay.
Maalmihii lasoo dhaafay degmooyinka magaalada Muqdisho waxaa kusoo badanayay weerarada ka dhanka ah askarta iyo saraakiisha dowladda Federaalka Soomaaliya waxaana badanaa weeraradaas lagu dilaa askarta iyo saraakiisha Nabad sugidda.